NLD ရုံးချုပ်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ရစဉ်
NLD ပါတီအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကနေ့ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှာ သတင်း မီဒီယာသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြား ရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကိစ္စ ဆုံးဖြတ်ဖို့ စော လွန်းနေသေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောကြားခဲ့တာပါ။
"ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုတာ တရားဝင်ကြေညာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်မှာလား၊ မယှဉ်ပြိုင်မှာလားဆိုတာကို တရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အခုအချိန်က သိပ်စောပါသေးတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာလား ဘယ်တော့ကျင်းပမှာလဲဆိုတာ တရားဝင်ကြေညာစရာ မရှိသေးပါဘူး"
လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပြီး ပြည်သူ တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မမှန်မှာကို စိုးရိမ်မိကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့လိုကြောင်းနဲ့ နှစ်ဘက်ပြေလည်ရေးကို ဦးတည်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
DSSk ရတာဟာ ပြည်သူအာဏာရတာနဲ့ အတူတူပဲ။ DSSK အာဏာမရအောင် ပိတ်ဆို့တာဟာ ပြည်သူ့ အာဏာကို ပိတ်ဆို့တာနဲ့အတူတူပဲ။ ဗမာစစ်တပ်ဟာ ပြည်သူကတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ လက်နက်ကိုတလွဲအသုံးချပြီး ဗိုလ်နေဝင်း နဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ ပြည်သူကို ပြန်သတ်နေတာ။ သူတို့ရဲ့ မွေးစားသားတွေက အခုထိသူတို့ပထွေးတွေ အာဏာကိုလွမ်းဆွတ်ပြီး ပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်နေတုန်းပဲ။
Jan 01, 2015 12:05 AM
အာဏာရှင်တွေရဲ့ မွေးစားသားတွေကတော့ သူတို့ ပထွေး အာဏာ လက်လွတ် ရျမဲ့ ဟာမှန်သမျှ မျက်ကန်းမျိုးချစ် ပြီပြီ မျက်စေ့ စုံမှိတ်ပြီး ဆန့်ကျင်နေမျာပဲ။ နည်းမှန်လမ်းမှန် ယှဉ်ပြိူင်ရင် သူတိူ့ရှုံး မှာသေချာနေလို့ပဲ။ စစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ တိုင်းပြည်ကိုဘယ်တော့မှတိုးတက်စေမှမဟုတ်ဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပါ။ တိူင်းပြည် ကိုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာ စစ်ဗိုလ်မဟုတ်ဘူး၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကလုပ်တာ။
Dec 31, 2014 08:17 PM
Please don't be worry! We never make amendment on 59(Sa).
Dec 31, 2014 12:01 AM